ဆရာကြီးတွေ၊ ဆရာမကြီးတွေပဲဖြေနိုင်မယ့် ဥာဏ်စမ်းမေးခွန်းတွေကို အတူတူဖြေကြည့်ကြရအောင်။ - Lifestyle Myanmar
မေးခွန်းနံပါတ် (၁) ။
(A) ၇၀၀။ (B) ၃၀၈၀။ (C) ၆၁၃၄ (D) ၆၃၁၆
မေးခွန်းနံပါတ် (၂) ။ မောင်ဘဆီမှာ ပိုက်ဆံ (၂၀) ကျပ်ရှိတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို (၈) ကျပ်နဲ့ ဝယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီစာအုပ်ကို လှလှဆီ (၁၃) ကျပ်နဲ့ ပြန်ရောင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မောင်ဘက (၃) ကျပ်တန် ရေခဲမုန့်တစ်ခုကို ဝယ်စားလိုက်တယ်။ ရေခဲမုန့်ဝယ်စားပြီးနောက် မောင်ဘဆီမှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကျန်မလဲ?
(A) (၅) ကျပ်။ (B) (၁၂) ကျပ်။ (C) (၁၆) ကျပ်။ (D) (၂၂) ကျပ်။
မေးခွန်းနံပါတ် (၃) ။ ဂြိုဟ်တွေထဲမှာ လအများဆုံးရှိတဲ့ ဂြိုဟ်က ဘာဂြိုဟ်လဲ ?
ဂျူပီတာဂြိုဟ် (B) ဗီးနပ်စ်ဂြိုဟ် (C) စေတန်ဂြိုဟ် (D) မားစ်ဂြိုဟ်
မေးခွန်းနံပါတ် (၄) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ကြောင်လေးတွေမှာ သွားဘယ်နှချောင်းရှိလဲ ?
(၁၄) ချောင်း (B) (၁၆) ချောင်း (C) (၂၈) ချောင်း (D) (၃၀) ချောင်း
မေးခွန်းနံပါတ် (၅) ။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ (၂၅) ကျပ်တန်ငွေစက္ကူကို မည်သည့်အချိန်တွင်တရားဝင်ငွေအဖြစ် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သလဲ။
၁၉၈၅ (B) ၁၉၈၇ (C) ၁၉၈၈ (D) ၁၉၉၇
မေးခွန်းနံပါတ် (၆) ။ မြန်မာ့သမိုင်းတစ်လျှောက် တတိယမြောက်သမ္မတရဲ့ အမည်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ဦးဘဦး (B) မန်းဝင်းမောင် (C) စဝ်ရွှေသိုက်
မေးခွန်းနံပါတ် (၇) ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံက ဘယ်နိုင်ငံလဲ ?
ဆန်မာရီနို (B) မော်လ်တာ (C) ဗာတီကန်စီးတီး (D) လစ်ချင်စတိန်း
နံပါတ် (၁) ။ ( C ) ၆၁၃၄
နံပါတ် (၂) ။ (D) (၂၂) ကျပ်
နံပါတ် (၃) ။ (C) စေတန်ဂြိုဟ်
စေတန်ဂြိုဟ်ပေါ်မှာ လအရေအတွက် (၈၂) စင်းအထိရှိပြီး ဒီအရေအတွက်က ဂြိုဟ်တွေထဲမှာ အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုကြပါတယ်။
နံပါတ် (၄) ။ (D) အချောင်း (၃၀)
အရွယ်ရောက်ပြီးသားကြောင်လေးတွေမှာ သွားအရေအတွက် အချောင်း (၃၀) ရှိပြီး ကြောင်ပေါက်စလေးတွေမှာတော့ သွားအရေအတွက် (၂၆) ချောင်းရှိပါတယ်။
နံပါတ် (၅) ။ (B) ၁၉၈၇
(၂၅) ကျပ်တန်ငွေစက္ကူတွေကို (၁၉၇၂) ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၈၇) ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့မှာတော့ အဆိုပါ (၂၅) ကျပ်တန်ငွေစက္ကူကို (၃၅) ကျပ်တန်၊ (၇၅) ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများနဲ့အတူ တရားဝင်ငွေအဖြစ်မှ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။
နံပါတ် (၆) ။ (B) မန်းဝင်းမောင်
မြန်မာ့သမိုင်းတစ်လျှောက် တတိယမြောက်သမ္မတဟာ မန်းဝင်းမောင်ဖြစ်ပြီး (၁၉၅၇) ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့မှ (၁၉၆၂) ခုနှစ် မတ်လ (၂) ရက်နေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
နံပါတ် (၇) ။ (C) ဗာတီကန်စီးတီး
ဗာတီကန်စီးတီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၄၄) သာ ကျယ်ဝန်းသလို လူဦးရေအားဖြင့်လည်း (၁၀၀၀) အောက်သာရှိပါတယ်။
ခြင်တွေ သင့်နားရွက်နားမှာ ဘာ့ကြောင့် တဝီဝီလာမြည်ရတာလဲ? ဒါကို သင်ဘယ်လိုရှောင်နိုင်မလဲ?
ခြင်မတွေသာ လူ့သွေးကို စားသုံးကြသော်လည်း ခြင်ထီးနဲ့ ခြင်မနှစ်မျိုးစလုံးက ညအချိန်မှာ သင့်ကို နိုးစေအောင် စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ာ တဝီဝီမြည်သံကို ထုတ်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ သို့သော် သူတို့ ဒီလိုလုပ်တာဟာ သင့်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့မှာ ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှိကြပါတယ်။...